अन्ततः काठमाडौं आउन किन तयार भए डा केसी ? यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
२नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम भोलि नेपाल आईपुग्ने
३भारतीय सेनाको ३९ सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै
४फेरी बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण, एकैदिन यति धेरै जनाको मृत्यु, देशभर तरंग
५आज पनि सर्वजनिक विदा
६एकाबिहानै मान्बु केन्द्र भएर भूकम्प
७आज २०७८ असोज ३१ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
८आजदेखि टी-ट्वान्टी विश्वकप, उद्घाटनमा दुई खेल हुँदै
९आज अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइदै
१०अधुरै रह्यो साफ च्याम्पियनसिप जित्ने नेपालको सपना, भारत आठौं पटक च्याम्पियन
११एक मिनेटको अन्तरमा भारतले दुई गोल गर्यो
१२नेपाली सेनाका मेजरले ‘जोसमा होस्’ गुमाउदा हंगामा, प्रधानसेनापति तनावमा
अन्ततः काठमाडौं आउन किन तयार भए डा केसी ? यस्तो छ कारण
जुम्लामा आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसी काठमाडौं आउन सहमत भएका छन् ।
प्रहरीले आफ्ना समर्थकमाथि बलप्रयोग गरेपछि डा. केसी आफैं काठमाडौं आउन तयार भएका हुन् । केहीबेरमा उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिनेछ । यसअघि सरकारले डाक्टरहरुको टोलीसहित नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पठाएको थियो ।
तर, डा. केसीका समर्थकहरुले काठमाडौंबाट गएको टोली र प्रहरीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका डा. केसीसम्म पुग्नै दिएका थिएनन् ।
डा. केसीले पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर हो भने माग पुरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । तर, स्थानीय प्रशासनले डा. केसीका समर्थकमाथि लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रुग्यास हानेको छ । लाठी चार्जबाट थुप्रै विद्यार्थी तथा स्थानीय घाइते भएका छन् ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक र गोविन्द केसीको आमरण अनसनबारे साझा धारणा बनाउन छलफल भएको छ ।
संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा भएको तीन दलको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक र केसीको अनसनको विषयमा साझा धारणा बनाउने र संसदमा सशक्त आवाज उठाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई सहभागी छन् ।
नेपाली कांग्रेसले गोविन्द केसीको आमरण अनसनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार नै विधेयक आउनुपर्ने भनाइ राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद बैठक बस्दैछ ।
२०७५ साउन ३ मा प्रकाशित ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्दै